Nepal Deep | प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम राष्ट्रघाती छ: सुजाता कोइराला
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम राष्ट्रघाती छ: सुजाता कोइराला
बिहिबार, पुष १६ २०७७
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा जान नहुने बताउनु भएको छ। नेतृ कोइरालाले संसद पुनस्थापना नभएको खण्डमा सर्वदलीय सरकार बन्नु पर्ने जिकिर गर्दै ओलीको नेतृत्वमा चुनाव स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको हो।
यसै सन्दर्भमा नेपालदीपले नेतृ कोइरालासँग गरेको संवाद:
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु हुन्छ भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौं। नेपालको भाग्य र भविष्यको चिन्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले सिर्फ आफ्नो ‘इगो’ सन्तुष्ट गर्नको लागि मात्र जुन कदम चाल्नु भयो त्यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती हो। यो हामीलाई स्वीकार्य हुदैन।
अबको विकल्प के त?
संसदको पुन:स्थापना हुनुपर्छ। र, संसदको पुन:स्थापना भएपछि चुनाव गर्न सकिन्छ। अरु विकल्पहरुको बारेमा सोच्न सकिन्छ। चुनाव घोषणा गर्नु भएको छ। तर उहाँले आजसम्म राजिनामा पनि दिनु भएको छैन। राष्ट्रपतिले पनि राजिनामा अझै माग्नु भएको छैन। कामचलाउ सरकारको रुपमा उहाँ अगाडी बढ्नु पर्ने थियो। केहि दिन अगाडी मन्त्री थप्नु भएको छ। उहाँ आफै कामचलाउ हैसियतमा बस्न मान्नु भएको छैन त्यसैले यो एकदमै शंकास्पद छ।
हामीलाई पूर्णविश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापनाको पक्षमा निर्णय गर्ने छ।
अदालतले संसद विघटनलाई संविधानसम्मत भन्यो भने नि?
संसद् पुनर्स्थापना काँग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो। तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि मान्नुपर्छ। यदि संसद पुनस्थापना हुन नसके सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्छ।
मुलुकलाई यतिकै छोड्न त मिलेन। रक्तपात रक्तपातको स्थिति सिर्जना गर्नु त भएन नि। त्यसको लागि सर्वदलीय सरकार अपरिहार्य छ। त्यस्तो सरकार बनाएर निर्वाचनमा गए निर्वाचनको अपनत्व सबैले लिन सक्छ र समस्याको समाधान हुन सक्छ।
गिरीजा बाबुले संविधान सभाको चुनाव अघि कस्तो स्थिति मा चुनाव गराउनु भयो? मुलुकमा त्यत्रो रक्तपात थियो। तराईमा आन्दोलन थियो। पहाडमा पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो क्यारियरलाई दाउमा राखेर चुनाव गराएर मुलुकलाई जोगाउनु भयो।
अहिले मुलुकलाई दाउमा राखेर संविधान विपरित संसद भंग गरिएको छ। मुलुकलाई दाउमा राख्ने होइन नि। नेता भनेको सबैलाई मिलाउने हो। सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो।
भनेपछि, ओलीको कदम संविधानलाई नै कमजोर बनाउनको लागि गरिएको भन्न खोज्नु भएको?
नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो, अन्तरिम संविधान ल्याइयो र पछि काँग्रेसको तर्फबाट सुशील दाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो। अहिले आएर हामीले सोच्नु परेको छ, साच्चै नेपाली काँग्रेसको त्यो इतिहास मेटाउन लागिएको त होइन। यदी त्यो हो भने त्यो मुलुकको लागि नै खतराको विषय हो।
सबै जातजाती, सबै धर्माव्लाम्वीहरुको भावनालाई समेटेर यो संविधान ल्याइएको थियो। जातिगत दङ्गा हुदैन, धार्मिक सहिष्णुता कायम हुन्छ भनेर संविधान बनाएको हो। यो संविधान आफैमा राम्रो संविधान छ। यसमा केहि त्रुटी छन् भने संसोधन गर्न सकिन्छ। तर आज प्रधानमन्त्रीले यो संविधानलाई मिच्नु भएको छ। खारेज गर्नु भएको छ। यो त राष्ट्रघाती कदम भन्छु म। यसरी घोषणा गरिएको चुनाव हुदैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई।
यदी भइहाल्यो भने पनि रक्तपात हुन्छ। बुथ क्याप्चर गरिन्छ। आगो लाग्न सक्छ। ठूलो द्वन्द निम्तिन सक्छ। नेपालमा अस्थिरता हुनसक्छ।
तपाईले यस्तो भनिरहदा नेपाली काँग्रेस सभापति त संसद पुनस्थापनाको कुरै नगरौं भन्नु हुन्छ?
उहाँले के बोल्नु भयो मलाई थाहा छैन। आम कार्यकर्ताको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ। आम जनताको भावना बुझेर उहाँ सच्चिनुपर्छ। हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं। हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ। आन्दोलन हुनुपर्छ। त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ। हाम्रो माग नै संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ। र, नयाँ संविधानको रक्षा गर्ने अहम जिम्मेवारी फेरी नेपाली कांग्रेसको काधमा आएको बुझ्नुपर्छ।
समयमै दलहरुले उपयुक्त कदम नचाले मुलुकमा रक्तपात हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्न। कांग्रेसले यो असंवैधानिक कदमकाे विरुद्ध आन्दोलन गर्नैपर्छ। गिरिजाबाबु जस्तो लिडरको आवश्यकता आज देशमा खड्किएको छ।
नेकपाको विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
नेपालमा स्थिरता आउँछ भनेर जनताले नेकपालाई भोट दिएका थिए। नेपालीलाई नेकपाले देखाएको विकास र समृद्धिको सपना त धोखा रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। उहाँहरुको एकता देशलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको रहेनछ त प्रमाणित भयो। उहाँहरु पदको लागि लडिरहनु भयो। यस्तो लडाई त काँग्रेसमा पनि थिएन। अहिले त कम्युनिस्टहरुले आफ्नो झगडामा देशलाई बन्दी बनाएका छन्। संविधानमाथि खेलवाड गरेका छन्।
यो लडाई सिद्धान्तको होइन पदको लागि हो। सबैलाई पद नै चाहिएको छ। प्रचण्डजीलाई पनि पद नै चाहिएको हो, माधव जीलाई पनि पद नै चाहिएको हो, केपीजीलाई त्यहिँ पद छोड्न गार्हो भएको हो।
मेरो हिसाबमा दुवै पक्ष दोषी छन्। माधवजी-प्रचण्डजी पनि मिलेर जान सक्नु हुने थियो नि। उहाँहरु नेतृत्व देखिएन। उहाँहरुले पनि त्यो गर्नु भएन। भित्री कुरा के छ थाहा छैन। भित्रबाट हेर्दा दुवै पक्ष दोषी देखिन्छ। पदको अघि देशलाई द्वन्द तर्फ धकेल्नु भयो। सबै जना झगडा गर्दा नै यो स्थिति पुगेको छ। अब सबै मिलेर संसद पुनस्थापना गर्नु नै पर्छ।
एकातर्फ संसद विघठित छ, सडकमा हिन्दूराष्ट्र पुनस्थापना देखि ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा लागेको स्थिति छ। देश कता जादै छ?
हिन्दू राष्ट्र ल्याउने नै हो भने पनि पहिले छलफल त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि संसद त चाहियो नि। संसद बिना नै अरु नै ढंगबाट हिन्दू राष्ट्रमात्र होइन अरु जुन सुकै एजेण्डा लादियो भने कस्तो स्थिति आउँछ? देश फेरी द्वन्दको भूमरीमा फस्छ। त्यसको लागि यही संविधानमा टेकेर परिवर्तनहरु गर्नु पर्छ। नत्र देश बर्बादी तर्फ जान्छ।